Cidlada ayaa la socotay lammaanaha | Bezzia
Cidlada ayaa wehelisay lamaanaha
Maria Jose Roldan | 13/10/2021 22:19 | Xiriirka
Xaqiiqdii waxaad maqashay wax ka badan hal mar weedha ah: "Waxaa fiican inaad keligaa noqoto intii aad ku jiri lahayd koox xun". Nasiib darro, waxaa jira dad badan oo doorbida inay ku jiraan xiriir sun ah, si ay uga fogaadaan inay keligood nolosha noqdaan. Cidlada caanka ah ee la socota ayaa ka badan inta dad badani u malaynayaan marka hore.
Waxba uma dhacaan lamaane la'aan maadaama ay aad u fiicantahay inaad keligaa noqoto intii aad ku jirtay xiriir aan caafimaad qabin, in aanay lahayn mustaqbal iyo in ay ku dambayso fashilaad.
1 Doobnimadu waa ikhtiyaar nololeed oo dhammaystiran
2 Faaruqnimada weyn ee kelinimada weheliso
3 Dhaawaca shucuureed ee kelinimada la socda
Doobnimadu waa ikhtiyaar nololeed oo dhammaystiran
Sida dhacda marka la yeelanayo lamaane, kali ahaanshaha waa ikhtiyaar nololeed oo aad u ansax ah. Laguma talinayo inaad xiriir la yeelato qof kale kaas oo jaceylku ka muuqdo maqnaanshihiisa oo sunta ay ku jirto iftiinka maalinta. Lamaanayaal badan oo maanta jira ayaa guuldaraysta maxaa yeelay ma jiro jaceyl dhab ah oo loo qabo dhinacyada iyo xiriirka waxaa loo sameeyay ku tiirsanaanta shucuureed ee aadka u weyn iyo rabitaanka inaan kaligood nolosha la joogin.
Faaruqnimada weyn ee kelinimada weheliso
Kalinimada la socota waxay faaruq weyn u keentaa qofka la il daran. Waxaad ka heli kartaa lammaanaha meel u dhow aragtida jireed laakiin heerka dareenka ah madhannimadu aad bay muhiim u tahay. Waxaa jira waxyaabo ama taxane taxane ah oo tilmaami kara in qofka uu ku dhacay kelinimo oo ay weheliyaan lammaanaha:
Lamaanuhu ma maqlaan isaga, taas oo aad u xanuun badan heer dareen.
Waxaa jira danayn buuxda ujeedooyin ama riyooyin suurtogal ah in labada qof ay wada fuliyaan.
Qofka dhaawacmay mar walba waa dambiile wax walba iyo Ma jiro isgaarsiin marka ay timaaddo xallinta dhibaatooyinka kala duwan ee ka dhex dhaca lammaanaha.
Calaamadahaasi waxay tilmaamayaan in lammaanuhu aysan ahayn midka la jecel yahay iyo in kelinimada la socota ee aan kor ku soo sheegnay ay dhexdooda degtay. Uma qalanto rafaad kaliya inaad yeelato lamaane waxaana aad looga doorbidayaa inaad keligaa ahaato. Xidhiidhku waa inuu noqdaa arrin laba ah waana inuu ahaadaa mid si guud uga qaybqaadashada labada qof.
Dhaawaca shucuureed ee kelinimada la socda
Xiriirka sunta ah uma fiicna qof iyo waxay u keeni kartaa dhaawac maskaxeed oo halis ah qofka la il daran. Lahaanshaha lammaane iyo dareemo kelinimo waa wax aan la oggolaan karin maadaama dhaawacyada shucuureed ee xaaladdan oo kale ay aad muhiim u yihiin. Marka tan la eego, waxaa ugu wanaagsan in sida ugu dhakhsaha badan loo soo afjaro xiriirkan oo la isku dayo in dib loo dhiso nolosha, keligeed ama qof kale oo caafimaadka ka dhiga lamaanaha.
Marka la soo koobo, lama huraan ma aha in lamaane la yeesho ama lala joogo qof xaqiiqda fudud ee kalinimada ka cararta. Waxaa jira waqtiyo inkasta oo uu leeyahay xiriir gaar ah, qofku weli waa kaligiis. Tani waa waxa loo yaqaan kelinimada wehelisa oo xiriirkan ma jiro wax jaceyl ama kalgacal, wax lama huraan u ah lamaanaha inay shaqeeyaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Cilmu-nafsiga iyo lamaanaha » Xiriirka » Cidlada ayaa wehelisay lamaanaha
Waa maxay sagxada miskahu iyo sida loo xoojiyo
Soo hel soo jeedinta jiilaalka dayrta ee Fikirka Mu